Kulindeleke ukuba badonse kanzima abashayeli ngenyanga ezayo | News24
Kulindeleke ukuba badonse kanzima abashayeli ngenyanga ezayo
Cape Town – Ukuqina kwentengo kawoyela ezweni lonke kanye nokwehla kwerandi okulokhu kuqhubeke njalo kuyizinkomba zokhuthi izonyuka kakhulu intengo yazo zonke izinhlobo zokawoyela ngokuphela kuka-Agasti, i-Automobile Association (AA) ixwayise kanjalo ngoLwesibili.
Le nhlangano ibiphawula ngombiko wentengo kawoyela wamaphakathi nenyanga ongacwaningiwe nokhishwe yiCentral Energy Fund (CEF).
“Irandi selehle ngokungango-20 cents uma liqhathaniswa nedola kusukela ngokuqala kuka-Agasti. Khonamanjalo, imikhiqizo kawoyela emhlabeni wonke ilokhu iqhubeka nokuba sezingeni eliphezulu eyafika kulona ngokuphela kukaJulayi,” kusho i-AA.
OLUNYE UDABA:Abashayeli bazongena bajule emaphaketheni ngo-Agasti
“Lokhu kusho ukuthi zonke izintengo zikawoyela maningi amathuba okuthi zinyuke kakhulu ngokuphela kwenyanga.”
Intengo kaphethiloli yanyuka ngo-19c ilitha ngokuqala kuka-Agasti ngenxa yentengo ephansi yerandi uma ngabe liqhathaniswa nedola kanye nentengo ephezulu kawoyela.
Ngakho-ke ukuqagula kuka-AA kwamaphakathi nenyanga kuthi uphetheloli kulindeleke ukuthi unyuke ngo-63c, udizili wona ngo-57c bese kuthi uparafini wona unyuke ngo-58c.
I-AA iqagula ukuthi ukunyuka kwentengo kapharafini ikakhulukazi, kuzoba nomthelela ongemuhle emakhaya amaningi ngenxa yokuthi imindeni eminingi ithembele kuwona ukuze ipheke, ikhanyise bese iyazifudumeza.
Le nhlangano ithi abantu abasebenzisa izinhlobo ezahlukene zikawoyela kumele nakanjani balindele ukukhokha kakhulu kusukela ngokuqala kukaSepthemba.